Aha aha: 316 igwe anaghị agba nchara antler agụụ iko
Ihe: 316 igwe anaghị agba nchara
Nha: elu 24cm n'obosara 8cm
1. Food ọkwa silicone ahịhịa, ike na mma-a drinkingụ.
2. Wuru mgbanaka silicone mgbanaka, na-eme ka ọ ghara ịdapụ mmiri.
3. Detachable cup uwe imewe, ihe adaba na-ebu.
4. Otu iko nwere okpukpu abụọ, nke nwere ike ịbụ sippy ma ọ bụ obere.
5. Pịa mkpuchi shei ma mepee ya ozugbo ịpịrị ya. Ihe mkpuchi shei.
Igwe anaghị agba nchara n'ime liner, jiri ahụ ike zuru ike.
7. Eyi-eguzogide iko ala, ndị concave na convex imewe nke isi bụ mụ na-adịghị mfe ịda.
8. Na-ekpo ọkụ ogologo ụbọchị dum, nchekwa 24 awa ọkụ.
9. Light na inogide, elu ọxịdashọn na-eguzogide, ike corrosion eguzogide.
10. agụụ ọla kọpa plating imewe nke n'ime tank, n'ụzọ dị irè gbochie okpomọkụ ọnwụ.
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara nwere ike thermos iko
Osote: igwe anaghị agba nchara thermos agụụ okpukpu abụọ mgbidi iko
Gwara mmanụ agụụ Kwụ Ọtọ Cup
Agụụ iko iko iko Buttocks
Agụụ Flask Cup
Agụụ Agwọ Iko